ရေခဲမုန့်သရဲလေးတွေ အပြတ်ခိုက်မယ့် Swensen’s… – FoodiesNavi
ရေခဲမုန့်သရဲလေးတွေ အပြတ်ခိုက်မယ့် Swensen’s…
By yin sandi On January 8, 2018 0
ကလေးလေးကနေ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေအထိ ရေခဲမုန့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ချိုအေးမွှေးတဲ့ ရေခဲမုန့်ရဲ့အရသာက မကြိုက်တဲ့သူမရှိသလောက်ရှားပါးပါတယ်။ အလှူပွဲ ၊ မွေးနေ့ပွဲ ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပါမကျန် ရေခဲမုန့်ကပါဝင်နေရာယူနေပြန်ပါတယ်။ အရင်ခတ်တွေတုန်းကတော့ ရေခဲမုန့်ကိုအသီးအရသာအစုံနဲ့သာ စားသုံးခဲ့ကြပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ရေခဲမုန့်ကိတ် ၊ ချောကလက်ရည်ဆမ်းသီဟိုစေ့ရေခဲမုန့် ၊ ဝေဖာရေခဲမုန့်စတဲ့ Menu အစုံစုံနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ Foodies Navi ကနေ Menu စုံပြီးအရသာရှယ်ကောင်းတဲ့ Swensen’s ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့ ရေခဲမုန့်ချစ်သူတွေကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်တာကြောင့် လူသိများပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် အစုံအလင်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့ ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆိုင်တည်နေရာလေးတွေကတော့–
No-1 . Dagon Centre , Play Road ,San Chaung Tsp, Yangon.
No-2. Ocean (Tamwe) , Banyardala Road ,Tamae Tsp , Yangon .
No-3. Junction (Mawtin) , Anawyahtar Road , Yangon .
No-4. Myanmar Plaza , No-1 Industrial Road , Yankin Tsp , Yangon.
Swensen’s မှာဆိုရင်တော့ City Tower , Milk Shake Overload , Funny Bug , Signature Sundaes , Strawberry Choc Chunk ice cream , Banana Mixed Nut Oreo , Vanilla ice cream , ၃ မျိုးအရသာရေခဲမုန့် , Chocolate Ring-A-Ding , Ultimate Chocolate Cake , Chocolate Lava , Oreo Brownie , Choc-o-latte , Espresso , Cafe Macha , Cappuccino , Black Coffee , Nutty Banana , Waffle Sundae , Kit Eat Fantasy , ခရမ်းရောင်ကောက်ညှင်းစတဲ့ Menu ဆန်းဆန်းလေးတွေကိုသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရသာကိုမမြည်းစမ်းခင် အစားအသောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တင် အရမ်းခိုက်သွားမှာပါ။ အရသာကိုပါပေါင်းစပ်ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မေ့မရတဲ့ချိုအေးမြမြ အရသာကိုခံစားသွားရစေမှာပါ။
အရွယ်သုံးပါးလုံးမရွေးဘဲ ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်တဲ့ Menu တွေကြောင့် မိသားစုလိုက် ဘိုးဘိုးဘွားဘွားသားသားမီးမီးတွေပါ ခေါ်လာပြီးအတူစားကြမလား ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးပဲစားမလား ၊ ချစ်သူလေးနဲ့ကြည်ကြည်နူးနူးစားချင်လား အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ်နော်။ ဆိုင်ခွဲတွေရှိတာကြောင့် နီးရာဆိုင်ကို သွားရောက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်တွေထိကို သွားရောက်သုံးဆောင်ဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်း 09960884884 ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်အရောက် Delivery Service တွေရရှိနိုင်တယ်နော်။
Image Source : www.facebook.com/swensen’smyanmar
In Restaurant Guides Tagged cake, coffee, Ice Cream Leaveacomment